Klonopin vs Xanax: मतभेद, समानता, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
औषधि बनाम मित्र औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कम्पनी समाचार कम्पनी कम्पनी, औषधि जानकारी कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, चेकआउट समुदाय भारी खेल समुदाय, कल्याण खेलहरु कल्याण चेकआउट कम्पनी, समाचार
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> Klonopin vs Xanax: मतभेद, समानता, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
Klonopin vs Xanax: मतभेद, समानता, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
क्लोनोपिन (क्लोनाजेपम) र जान्याक्स (अल्प्रजोलम) उस्तै उस्तै औषधीहरू हुन् जुन चिन्ता र आतंक विकारहरूको उपचारको लागि संकेत गरीन्छ। दुबै औषधीहरूलाई बेन्जोडियाजेपाइनका रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ, जुन मस्तिष्कमा GABA को गतिविधि बढाएर काम गर्दछ। गाबा, वा गाबा-एमिनोब्यूटेरिक एसिड, एक अवरोध न्युरोट्रान्समिटर हो जसले केन्द्रीय स्नायु प्रणाली (सीएनएस) मा गतिविधि कम गर्नमा ठूलो भूमिका खेल्दछ।
Klonopin र Xanax दुबै एक आराम र शान्त प्रभाव उत्पादन गरी चिन्ताको लक्षणहरु लाई उपचार गर्न मद्दत गर्दछ। जे होस्, तिनीहरूसँग कति लामो समय सम्म काम गर्ने र अन्य सर्तहरूको लागि प्रयोग हुन सक्छ भन्नेमा उनीहरूसँग उल्लेखनीय भिन्नताहरू छन्।
Klonopin र Xanax बीचका मुख्य भिन्नताहरू के हुन्?
क्लोनोपिन क्लोनाजेपमको ब्रान्ड नाम हो। यो एक आधा जीवन को साथ एक लामो अभिनय benzodiazepine मानिन्छ To० देखि hours० घण्टा । Klonopin एक र चार घण्टा भित्र लिन पछि रगतमा अधिकतम एकाग्रतामा पुग्छ।
Klonopin जेनेरिक ट्याब्लेटको रूपमा ०. mg मिलीग्राम, १ मिलीग्राम, र २ मिलीग्रामको शक्तिमा उपलब्ध छ। मौखिक रूपमा विच्छेदन (ODT) ट्याब्लेटहरू ०.२25। मिलीग्राम, ०.२5 मिलीग्राम, ०. mg मिलीग्राम, १ मिलीग्राम, र २ मिलीग्रामको शक्तिमा पनि उपलब्ध छन्।
Xanax सामान्यतया यसको जेनेरिक नाम अल्प्रजोलम द्वारा चिनिन्छ। Klonopin विपरीत, Xanax एक छोटा अभिनय बेन्जोडियाजेपाइन हो वरपरको आधा जीवन को साथ ११ घण्टा । पीक रगतको एकाग्रता प्रशासन पछि एक देखि दुई घण्टा भित्र पुग्छ।
Xanax ब्रान्ड र जेनेरिक ट्याबलेटमा ०.२5 मिलीग्राम, ०. mg मिलीग्राम, १ मिलीग्राम, र २ मिलीग्रामको शक्तिमा आउँदछ। विस्तारित-रिलीज ट्याब्लेटहरू ०. mg मिलीग्राम, १ मिलीग्राम, २ मिलीग्राम, र mg मिलीग्रामको शक्तिमा पनि उपलब्ध छन्। ट्याब्लेट निल्न समस्यामा परेकाहरूलाई, अल्प्रजोलम ओडीटी ट्याब्लेट वा तरल समाधान (ईन्टेन्सोल) को रूपमा सिफारिस गर्न सकिन्छ।
Klonopin र Xanax बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग बेन्जोडियाजेपाइन
जेनेरिक नाम के हो? क्लोनाजेपाम अल्प्राजोलम
मौखिक रूपमा ट्याब्लेट विच्छेदन गर्दै मौखिक ट्याब्लेट
मानक खुराक के हो? आतंक विकार:
सुरुमा, 0.25 मिलीग्राम दैनिक दुई पटक मुखबाट। Days दिन पछि, खुराक ०.25२25 मिलीग्रामले ०.२5 मिलीग्राम दिनको दुई पटक हरेक days दिनमा १ मिग्रा प्रति दिन लक्षित खुराकमा बढाउन सकिन्छ।
१. mg मिलीग्राम प्रति दिन do खुराकमा विभाजित। खुराक प्रत्येक days दिनमा ०. mg मिलीग्राम १ मिलीग्रामले बढाउन सकिन्छ जुन अधिकतम खुराक प्रति दिन २० मिलीग्राम हो। आतंक विकार:
तत्काल रिलीज वा ODT ट्याब्लेटहरू: ०. mg मिलीग्राम दिनहुँ तीन पटक मुखबाट। खुराक प्रति3देखि days दिन १ मिलिग्राम / दिनको दायरामा १ मिलीग्राम प्रति दिन बढाउन सकिन्छ। विस्तारित-रिलीज ट्याब्लेटहरू:
०. mg मिलीग्रामदेखि १ मिग्रि मुखबाट एक पटक। खुराक प्रति दिन १ मिलिग्राम प्रति दिन mg देखि by मिलीग्राम सम्म बढाउन सकिन्छ।
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? उपचारको अवधि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक द्वारा निर्धारित गरिन्छ। बेंजोडाइजेपाइनको दीर्घकालीन उपयोगको सिफारिश गरिएको छैन। उपचारको अवधि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक द्वारा निर्धारित गरिन्छ। बेंजोडाइजेपाइनको दीर्घकालीन उपयोगको सिफारिश गरिएको छैन।
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्क, १ 18 बर्ष र माथिका
(दौरा विकारका साथ बच्चाहरू: १० बर्ष भन्दा उमेर वा l 65 lbs। शरीरको वजन को) वयस्क, १ 18 बर्ष र माथिका
Klonopin र Xanax द्वारा उपचारका सर्तहरू
चिन्ताजनक औषधीको रूपमा, क्लोनोपिन र Xanax चिन्ता र आतंक हमला को लक्षणहरु लाई कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ। Klonopin र Xanax दुबै एफडीए वयस्कहरूको साथ वा बिना पनीक विकारको उपचार गर्न अनुमोदित छन् एगोराफोबिया ।
Klonopin पनि उपचार गर्न अनुमोदित छ जब्ती विकार वयस्क र बच्चाहरू मा। यो अक्सर एक्लो वा लेनोनोक्स-ग्यासट सिन्ड्रोम, एटोनिक दौरा र मायोक्लोनिक दौराको लागि अन्य उपचारको साथ प्रयोग गर्दछ। Klonopin पनि ती व्यक्तिहरुमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जसले अनुपस्थिति बाट दौर्नु पर्दछ।
Xanax चिन्ता विकारहरु को लागी छोटो अवधि को राहत को लागी स्वीकृत गरीएको छ। चिन्ता विकारहरू सामान्यीकृत चिन्ता विकार र सामाजिक फोबिया समावेश गर्दछ। यसको एफडीए लेबलका अनुसार, Xanax ले चिन्ताको उपचार पनि गर्न सक्दछ जुन सँगसँगै छ डिप्रेसन ।
अफ-लेबल प्रयोग गर्दछ Klonopin र Xanax को अनिद्रा, आवश्यक काम्प, प्रीमेन्स्ट्रूअल सिन्ड्रोम, र बेचैनी लेग सिन्ड्रोम समावेश गर्दछ।
सर्त Klonopin Xanax
आतंक विकार हो हो
जब्ती विकार हो हैन
आवश्यक कम्पन अफ-लेबल अफ-लेबल
बेचैन खुट्टा सिन्ड्रोम अफ-लेबल अफ-लेबल
मासिकपूर्व सिन्ड्रोम अफ-लेबल अफ-लेबल
Klonopin वा Xanax अधिक प्रभावी छ?
हाल, कुनै मजबूत हेड-टू-हेड अध्ययनहरू छैन जुन क्लोनोपिन र झ्यानाक्ससँग तुलना गर्दछ। दुबै बेंजोडाइजेपाइनहरू प्रभावकारी छन् उनीहरू कसरी प्रयोग हुन्छन् र के सर्तहरूमा उनीहरू उपचार गरिरहेका छन्।
Xanax जब्ती विकारहरूको उपचारमा बढी प्रभावकारी हुन्छ। योसँग कार्यको लामो अवधि पनि छ, जुन केहि व्यक्तिहरूको लागि उपयुक्त हुन सक्छ।
Xanax रगतको स्तर लगातार राख्नको लागि प्रति दिन धेरै पटक लिन आवश्यक पर्दछ। यो पनि बढ्न सक्छ फिर्ता लक्षणको जोखिम ।
चिन्ता र डिप्रेसन प्रायः सँगै हुने भएकोले, बेन्जोडाइजेपाइनहरू सामान्यतया एन्टीडिप्रेससन्टको संयोजनमा सिफारिस गर्न सकिन्छ। एक मा मेटा-विश्लेषण , सामान्य चिन्ता डिसअर्डर (GAD) को साथ बेंजोडायजेपाइन र एन्टीडिप्रेससन्ट सँगै सुरू गर्दा कम फाइदा अनुभव गरे।
यो बुझ्नु महत्वपूर्ण छ कि बेंजोडाइजेपाइनसँगको उपचार अत्यधिक व्यक्तिगत गरिएको छ। तपाईंको मानसिक स्वास्थ्यको लागि उत्तम विकल्पमा चिकित्सा सल्लाहको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
Klonopin vs Xanax को कभरेज र लागत तुलना
Klonopin एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हो कि यसको सामान्य वा ब्रान्ड-नाम फारममा किन्न सकिन्छ। जेनेरिक क्लोनोपिन ट्याब्लेटहरू प्रायः मेडिकेयर र बीमा योजनाहरूले ढाकेका हुन्छन्। सामान्य Klonopin को औसत खुद्रा लागत typically 45 को आसपास सामान्यतया। प्रिस्क्रिप्सन छुट कार्ड प्रयोग गरेर नगद मूल्यलाई price १ or वा कममा कम गर्न सक्दछ।
Xanax जेनेरिक र ब्रान्ड नाम ट्याब्लेटमा पनि उपलब्ध छ। तत्काल रिलीज जेनेरिक Xanax ट्याबलेट को लागी, औसत खुद्रा मूल्य $ 63 को रूप मा अधिक हुन सक्छ। यद्यपि, एकलकेयर डिस्काउंट कार्डको साथ, जेबको लागतहरू केही फार्मेसीहरूमा १ at भन्दा कममा कम गर्न सकिन्छ। तपाईंको औषधीको समग्र लागत तपाईंको मनपर्ने फार्मेसीमा आधारित हुन्छ र कति ट्याब्लेटहरू पाइरहेका छौं।
मानक खुराक १ मिलीग्राम ट्याब्लेट १ मिलीग्राम ट्याब्लेट
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ 0– $ 24 $ ०– $2.२
एकलकेयर लागत $ 14- $ 16 $ १-- $ २।
Klonopin vs Xanax का सामान्य साइड इफेक्टहरू
Klonopin र Xanax को सबै भन्दा साधारण पक्ष प्रभाव उनीहाती र उदासीनता। Klonopin वा Xanax लिनेहरूले थकान, चक्कर आउने वा हल्का टाउको, समन्वय गुमाउने, र मेमोरी कमजोरी । सुख्खा मुख Klonopin र Xanax सँग सम्बन्धित एक सामान्य साइड इफेक्ट पनि हो।
कसरी स्वाभाविक रूप मा candida खमीर संक्रमण बाट छुटकारा पाउन
बेंजोडाइजेपाइनका गम्भीर दुष्प्रभावहरूमा गम्भिर निन्द्रा, भ्रम, दौरा, कमजोरी, र सास फेर्न समस्या हुन सक्छ। गम्भीर साइड इफेक्टहरू अधिक मात्रामा देखा पर्न सक्छन् वा जब औषधि निर्धारितको रूपमा लिईएन।
तन्द्रा हो % 37% हो %१%
डिप्रेसन हो %% हो १%%
थकान हो %% हो > १%
समन्वय गुमाउने हो %% हो > १%
मेमोरी कमजोरी हो %% हो > १%
सुख्खा मुख हो * रिपोर्ट गरिएको छैन हो पन्ध्र%
स्रोत: डेलीमेड ( Klonopin ), डेलीमेड ( Xanax )
Klonopin vs Xanax का ड्रग अन्तर्क्रिया
Klonopin र Xanax मुख्यतया CYP3A4 एंजाइम द्वारा कलेजोमा मेटाबोलिज, वा प्रशोधन हुन्छन्। CYP3A4 अवरोधकर्ताहरूले यी बेन्जोडियाजेपाइनहरूको रगतको स्तर बढाउन सक्दछन्, जसले नतिजा प्रभाव बढाउन सक्छ। CYP3A4 अवरोधकर्ताहरूले केटोकोनाजोल जस्तै एन्टिफंगलहरू साथै एरिथ्रोमाइसिन जस्ता एन्टिबायोटिकहरू समावेश गर्दछ।
CYP3A4 inducers Klonopin or Xanax को मेटाबोलिज्मको गति बढाउन सक्छ र अन्ततः उनीहरूको प्रभावकारिता कम गर्न सकिन्छ। CYP3A4 inducers अन्वेषकहरुमा फेनिटोइन र carbamazepine जस्तै एन्टिकोनवल्सेन्ट ड्रग्स समावेश गर्दछ।
किनभने Klonopin र Xanax छ CNS निराश प्रभावहरू, ती अन्य औषधिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छन् समान प्रभावहरू छन्। बेन्जोडियाजेपाइनहरू ओपिड र ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसन्ट्स जस्ता औषधिहरू सेवन गर्दा गम्भीर निद्रा, श्वासप्रश्वासको उदासीपना, र मृत्युको जोखिम बढाउन सक्छ, विशेष गरी ठूलो डोजमा।
औषधि औषधि वर्ग Klonopin Xanax
Nefazodone CYP3A4 अवरोधकर्ताहरू हो हो
Lamotrigine CYP3A4 inducers हो हो
इमिप्रामिन Tricyclic antidepressants हो हो
Klonopin र Xanax को चेतावनी
Klonopin र Xanax दुबै प्रयोग बारे उनीहरूको औषधि लेबलमा चेतावनी छ ओपियोड्सको साथ बेंजोडाइजेपाइनहरू । बेन्जोडियाजेपाइन र ओपियोइड्सको मिश्रणले बेहोश पार्छ, धेरै उथलपुथल सास फेर्छ, कोमा र मृत्यु हुन्छ। यस कारणले गर्दा, यी औषधिहरू सँगै खानु हुँदैन। यदि तिनीहरू सँगै लिनुपर्‍यो भने, उनीहरूको खुराक अनुगमित वा समायोजन गरिनु पर्छ सुरक्षाको लागि।
बेन्जोडियाजेपाइन - कहिलेकाँही बेंजोस भनिन्छ सामान्यतया दुरुपयोग गरिन्छ। विगतमा पदार्थ दुर्व्यवहारको इतिहास भएका व्यक्तिहरू बेन्जोडियाजेपाइनसँग दुर्व्यवहार र निर्भरताको बढि जोखिममा हुन सक्छन्। Klonopin र Xanax हुन् तालिका IV संयुक्त राज्य अमेरिका मा DEA द्वारा वर्गीकृत ड्रग्स।
बेन्जोडियाजेपाइन छोटो अवधि के उपयोग को लागी हो र अचानक बन्द गरीनु हुँदैन। यसको खुराकलाई टेपर नगरी यी औषधीहरू रोक्दा फिर्काइ लक्षणहरू हुन सक्छ।
गम्भीर अवस्थाहरूमा, निकासीका लक्षणहरू जीवनको लागि खतरनाक हुनसक्दछन् र यसले पलटाउ चिन्ता, अनिद्रा, र दौरा समावेश गर्दछ। Xanax को छोटो अभिनय प्रकृति को कारण, क्लोनोपिनको तुलनामा Xanax संग वापसी हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
Klonopin vs Xanax को बारे बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
Klonopin एक लामो अभिनय benzodiazepine हो कि एफडीए आतंक विकार र दौरा उपचार को लागी अनुमोदित छ। यो तत्काल रिलीज र मौखिक विघटन ट्याब्लेटमा उपलब्ध छ। Klonopin १ 18 बर्ष र माथिका वयस्कका साथसाथै १० बर्ष उमेरका बच्चाहरूमा जबरजस्ती विकारको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Xanax एक छोटो अभिनय बेन्जोडियाजेपाइन हो कि चिन्ता विकार र आतंक विकारहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो मौखिक ट्याब्लेट, मौखिक रूपमा विच्छेदन ट्याब्लेट, विस्तारित-रिलीज ट्याब्लेट, र मौखिक तरलको रूपमा आउँदछ। Xanax सामान्यतया १ 18 बर्ष वा माथिका वयस्कहरूमा तोकिन्छ।
Klonopin र Xanax उस्तै हो?
Klonopin र Xanax समान छैन। क्लोनोपिन Xanax को तुलनामा शरीरमा लामो समय सम्म रहन्छ। Klonopin वयस्कहरू र बच्चाहरूमा दौरा केहि प्रकारहरू उपचार गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Klonopin वा Xanax राम्रो छ?
दुबै Klonopin र Xanax चिन्ता र आतंक हमला को लक्षणहरु को लागी प्रभावी उपचार हो। Klonopin केहि केसहरुमा दैनिक एक वा दुई पटक लिन सकिन्छ जबकि Xanax प्रति दिन धेरै पटक लिन आवश्यक पर्दछ। फिर्ता लक्षणहरू Xanax संग हुन सक्छ। तपाईंको उत्तम उपचार विकल्प निर्धारण गर्न चिकित्सकको परामर्श लिनुहोस्।
के म गर्भवती हुँदा क्लोनोपिन वा झान्याक्स प्रयोग गर्न सक्छु?
Klonopin र Xanax सामान्यतया गर्भावस्थामा प्रयोग गर्न सिफारिस गरिदैन। त्यहाँ यस्तो सम्भावना छ कि यी औषधीहरूले निम्त्याउन सक्छ जन्म दोष । धेरै चिकित्सा पेशेवरहरूले benzodiazepines लाई बेवास्ता गर्न सल्लाह दिनुहुन्छ यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ। गर्भवती हुँदा उपलब्ध उपचार विकल्पहरूको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग जाँच गर्नुहोस्।
के म Klonopin वा Xanax रक्सीको साथ प्रयोग गर्न सक्छु?
मदिराले Klonopin वा Xanax का साइड इफेक्टहरूलाई कम्पाउन्ड गर्न सक्छ र सँगै मिलेमा बढि गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ। Klonopin वा Xanax मा हुँदा रक्सी पिउँदा गम्भीर तन्द्रा, समन्वय गुम्न, र श्वासप्रणालीको उदासीनता हुन सक्छ। त्यहाँ धेरै छन् केसहरु बेन्जोडियाजेपाइनसँग मदिरा जोड्नेहरूमा कोमा र श्वासप्रश्वासको डिप्रेसनको।
Klonopin तपाइँ कसरी महसुस गर्नुहुन्छ?
क्लोनोपिनसँग एनिसियोलिटिक प्रभावहरू हुन्छन् जसले चिन्ताका लक्षणहरूलाई शान्त र शान्त पार्न मद्दत गर्दछ। Klonopin पछि, तपाईं अधिक सहज र कम डर वा तनाव महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। जो मानिसहरू निरन्तर चिन्ताका साथ बाँचिरहेका छन् उनीहरू निरन्तर चिन्ता बिना आफ्नो दैनिक जीवनको बारे मा जान सक्षम हुन सक्छन्।
के क्लोनोपिनले मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ?
Klonopin सीधा मानसिक स्वास्थ्य समस्या पैदा गर्दैन। जब सिफारिसको रूपमा लिईन्छ, Klonopin दुर्बल चिन्ता, आतंक विकार, र दौरामा उपचार गर्न सक्छ। जहाँसम्म, यदि तपाइँ क्लोनोपिन दुरुपयोग गर्नुहुन्छ वा यसमा शारीरिक निर्भर हुनुहुन्छ भने, तपाईले उपचार बन्द गरे पछि फिर्ताको लक्षणहरू अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। फिर्ता लक्षणहरू चिडचिड, मुड स्विings्ग, र आन्दोलन जस्ता व्यवहारमा परिवर्तन समावेश गर्न सक्दछ। Klonopin बिस्तार बिस्तारै टेपर हुनुपर्दछ लक्षण फिर्ता लक्षणहरू जोगिनका लागि।
Statins: प्रयोग, साधारण ब्रान्ड, र सुरक्षा जानकारी
के तपाइँ valtrex लिँदा एक प्रकोप हुन सक्छ
Dulcolax लाई काम गर्न कति समय लाग्छ?
के तपाइँ कफ सिरप बाट पिएको पाउन सक्नुहुन्छ?